SOLASOLV ဖန်သားပြင်များနှင့် ROLASOLV ထည်ကြိတ်စက်/မီးပျက်သောလိုက်ကာများ
ရေတပ် / စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ
မည်သည့်အနေအထားလျှံနှောင့်နှေးလျှပ်စစ်ဓါတ်အားများပြတ်တောက် roller မျက်စိကန်းအတွက်STOPLITE®မှတ်တိုင်
CASSLITE® roller လိုက်ကာ
DIMMLITE® privacy ကိုလိုက်ကာ
powered SELFPOWA®အဝေးထိန်းဘက်ထရီမျက်စိကန်းခြင်း, ဖန်သားပြင်
ကော် Window ရုပ်ရှင်ပွဲတော်
အာမခံချက် / အာမခံသတင်းအချက်အလက်
တစ်ဦး quotation အ / စျေးနှုန်းကိုတောင်းဆို
အတု SOLASOLV ဖန်သားပြင်
ယူကေလွတ်လပ်ရေး - ယူကေ
IMPA 150721 နှင့် 150722 ဖန်သားပြင်နှင့်မျက်စိကန်းသော
တစ်စျေး / Quote Get
44 191 454 8595 + ယခုကျွန်တော်တို့ကို Call
အဆိုပါ SeeGoing ဖြေရှင်းချက်
Flame ဟာနှောင့်နှေး Sunshades & လှေ, သင်္ဘော, ရေနံတူးစင်, ATC Towers & crane သည်ရေကြောင်း Window ကိုလိုက်ကာ
ကြည့်ရန်ထုတ်ကုန်များ တစ်ကိုးကား Get
ထောက်ပံ့ anti-တောက်ပ Window Shades နှင့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားများပြတ်တောက်ကြိတ်စက်လိုက်ကာ သင်္ဘောများနှင့်ကမ်းလွန်ရေယာဉ်များအဘို့
45 + နှစ်ပေါင်းစက်မှုလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံကို
181,940 window Shades ထောက်ပံ့
SOLASOLV® နှင့် ROLASOLV®
SOLASOLV®အမှတ်တံဆိပ်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်တစ်ခုတည်းသောပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိသည့်တောက်ပသော anti-glare window sunscreen များဖြစ်သည်။ Type of အတည်ပြုလက်ခံထားသည့် FOUR အမျိုးအစားများဖြစ်သော Lloyds, DNV, ABS နှင့် RINA တို့ဖြစ်သည်။ SOLASOLV® roller ဖန်သားပြင်များသည်လမ်းညွှန်ပြတင်းပေါက်များတွင်တပ်ဆင်သောအခါသက်သေပြနိုင်သောဘေးကင်းလုံခြုံရေးအထောက်အကူဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင်မျက်စိကန်းအဖြစ်လူသိများ။
ROLASOLV®အမှတ်တံဆိပ်အထည်အလိပ်မှိတ်တုတ်မှိတ်မျက်လုံးများသည် Flame Retardant ဖြစ်သည်။ ROLASOLV ® Roller Shades သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်တစ်ခုတည်းသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပြီးအဏ္ဏဝါရေယာဉ်အမျိုးအစားအားလုံးတွင်အသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုထားသည်။ ROLASOLV ®အရိပ်များသည်တစ်နေ့တာတွင်ညအိပ်အဖြစ်ပြောင်းသွားသည်။ အမှုထမ်းများ၊ guests ည့်သည်များနှင့်ပိုင်ရှင်များသည်အဖိုးတန်သောအနားယူခြင်းနှင့်သင့်အတွင်းပိုင်းအလှဆင်မှုနှင့်ကိုက်ညီသောအရောင်အမျိုးမျိုးဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။
ပိုမိုသောအချက်အလက်များ• Quote & Sample Requests
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဖြေရှင်း၏ကမ္ဘာ့ဦးဆောင်ပေးသွင်း၏တဝတည်းဖြစ်ကြ၏ Flame ဟာနှောင့်နှေး Sunshades & အဏ္ဏဝါ Window ကိုလိုက်ကာ လှေအဘို့, သင်္ဘော, ရေနံတူးစင်, ATC Towers & crane ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြည့်အဝအကွာအဝေးဆန့်ကျင်တောက်ပ Screen, လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုများမျက်စိကန်းကြိတ်စက်မျက်စိကန်းသီးသန့်လုံခြုံရေးမျက်စိကန်းအဝေးမှထိန်းချုပ်သောမျက်စိကန်းခြင်း, နေရောင်ကာကွယ်ဆေးနှင့်ကော် Window ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ပါဝင်သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့SOLASOLV® Anti-တောက်ပအဏ္ဏဝါနေရောင်အရိပ်လေးကအဓိကအမျိုးအစားအတည်ပြုချက်အလောင်းတွေအားဖြင့်အဏ္ဏဝါအသုံးပြုရန် Approved အမျိုးအစားများမှာနေတုန်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏ROLASOLV® Flame ဟာနှောင့်နှေး Sunshades, အဏ္ဏဝါရေယာဉ်များအမျိုးအစားအားလုံးကိုအပေါ်အသုံးပြုရန် Approved ကမ္ဘာကြီးကိုအမျိုးအစားအတွက်တစ်ခုတည်းသော BRAND များမှာ
40 နှစ်ကျော်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနှင့်သောင်းချီတပ်ဆင်ရေယာဉ်များထောင်ပေါင်းများစွာ၏၏နှင့်အတူနေရောင်ခြည်သင်အမြင့်မားဆုံးအရည်အသွေးမြင့်ကမ်းလှမ်းရန်ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်မယ့်ကုမ္ပဏီဖြစ်ကြောင်းဖြေရှင်း အဏ္ဏဝါနေရောင်အရိပ် နှင့်ပြတင်းပေါက်လိုက်ကာများနှင့်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုပြိုင်ဘက်ကင်းချဉ်းကပ်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါကသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့များအတွက်ကိုးကားများအတွက် အဏ္ဏဝါလိုက်ကာယခုကျွန်တော်တို့ကို ကျေးဇူးပြု. ဆက်သွယ်ပါ!
© 2017-2021 နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး Solve လီမိတက်။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး
sleeky နေဖြင့် website ကို